Mindnode 2: jiri nlezianya mee maapụ uche na Mac gị Esi m mac
Ọnye na -bụ Javier Porcar? | | Mac App Store, Noticias, ọtụtụ
Ọ bụrụ na anyị eleghachi anya azụ, n'ọhịa nke ịhazi ọrụ, ịhazi na ịzụlite ha site na enyemaka nke Mac anyị, anyị na-amalite site na ndị dị mfe na-edetu. Nkọwa ndị a na-akawanye oge, rue oge ugbu a ị nwere ike ịkọwa eserese, abụ olu ụtọ ma ọ bụ foto, iji gaa n'ihu Ihe ncheta nke ọrụ ndị anyị na-echere.
Na ụzọ anyị na-achọta njikọta nke ihe niile dị n'elu, na mmemme dịka Evernote, ndepụta ndọtị o Trello. Ma taa, anyị ga-ahụ echiche ọhụrụ, ohere nke mee uche ma obu echiche map, site n'enyemaka nke osisi eserese ma ọ bụ akụ nke ha kọwara anyị n'ụlọ akwụkwọ, mana oge a na Mac anyị.
Nkịtị 2 na-achọ ịzụlite echiche ma ọ bụ echiche sitere n'echiche dị n'etiti na nke a, na e nwere ọtụtụ ndọtị ka anyị na-ewere dị ka ihe kwesịrị ekwesị, na-emetụta ụfọdụ echiche na ndị ọzọ na ihe niile a na nghọta na ụzọ bara uru. Anyị nwere ike ikwu nke ahụ anyị na-eche ihu ngwa dị ukwuu iji mee eserese.
Oge ị hụrụ onwe gị "rapaara" na ihuenyo zuru mode na-enye gị ohere ịtụgharị uche na-enweghị ndọpụ uche site na akara ngosi ma ọ bụ Ogwe. Ọzọkwa, ọ bụrụ na "foto bara uru otu puku okwu" ị nwere ike itinye ụdị onyonyo ma ọ bụ akwụkwọ mmado niile.
Ọdịnaya na-ebu ụzọ, ọ bụghị imewe. Ka anyị ghara iche na ngwa na-eleghara imewe ahụ anya, anyị anaghị ekwu maka nke a: enwere ọrụ na ya na-enye ohere izochi akụkụ nke ọrụ anyị, ka ị ghara igbochi echiche zuru oke. ọzọ mma: Mata, gbanwee agba na contours ọ bụla ọnụ na-amasị gị nakwa tinye ndetu na mkpado na echiche.
Ruo ebe a, mmadụ ga-anya ụgbọala keynote ị nwere ike iche na ọ na-eme nke ahụ na ngwa Apple a ma ama. Ma akụkụ abụọ dị oke mkpa na-enye ya uru doro anya:
Ọnụ nwere ike ịmalite ọrụ ị nwedịrị ike ịtọlite ​​ọganihu nke ọrụ ndị ahụ. Ya mere, anyị na-etinye njikwa ọrụ na ngwa a, ihe bara ezigbo uru.
Mbubata, Mbupụ ma kesaa dị ka ịchọrọ: ngwa etinyere n'ime iCloud, na-enye gị ohere ịrụ ọrụ na Mac ọzọ (laptọọpụ) ma ọ bụ ngwaọrụ iOS. A na-ebupụ ihe aga-eme iji cheta, ihe ma ọ bụ Omnifocus, na mbubata ọrụ na mbupụ na ogologo ndepụta nke ngwa na ụdị.
Na nkenke, ọ bara uru ịnwale echiche ọhụrụ a nke ịmepụta echiche na ọrụ, nke echicheOnCanvas na-etinye n'aka anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Mindnode 2: jiri nlezianya mee ka uche maapụ na Mac gị
Ọ naghị adị njọ, mana ahụrụ m na ọ na-efu nnukwu ego. M na-eji SimpleMind Free na maka mkpa m ọ karịrị oke.
Basic ngwa na-apụghị-efu efu gị Mac